जो विधान मान्दैन, उहि एकता पक्षधर ?भिम रावलको प्रश्न…हेर्नुहोस।
काठमाडौ:बैठकमा क,डारुपमा प्रस्तुत भएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीभित्रको अवस्था असामान्य बनेको बताए । पार्टीमा जसले विधान र पद्दतिअनुसार चल्नुपर्छ भनिरहेको छ, उनीहरुलाई नै एकता वि,रोधीका रुपमा प्रचार गरिएको र जो विधान मान्दैन, उचाहिँ एकताको पक्षधर भन्ने प्रचार गर्न खोजिएको रावलले बताए ।
यो स्थायी कमिटीको बैठक असार १० गतेदेखि आजसम्म यति लामो समयसम्म बस्दाखेरि पनि बैठकले कुनै पनि नि,र्णय गरेन । बै,ठकमा राम्रोसँग छलफल भएन । यसले हाम्रो पार्टीको क्षमता जनता र सबैका अगाडि हाम्रो विश्वसनीयतामाथि नै चो,ट पुर्‍याएको छ । र, बाहिर मुख देखाउन नसकिने स्थिति भएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएका बेलामा हामी २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर पार्टी विधानको धारा ४९ को ४ अनुसार बैठकको माग गर्‍यौं । विधान अनुसार माग गर्दा पनि बैठक बोलाइएन । अहिले पनि बै,ठकका कार्यसूचिहरुमा प्रवेश नगर्ने, त्यसमा छलफल नगर्ने र नटुंग्याउने कुरा यो उचित भएन । बैठकमा छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने काम गर्नुपर्छ ।
पार्टीको विभाजनको जुन कुरा गरिँदैछ, हामी पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ, पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ र पार्टीमा फुटका कुरा गर्नुहुँदैन, पार्टी प्रणालीबाट चल्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरु नै पार्टी फुटतिर लागे भनेर ठान्छ भने त्यो गलत कुरा हो ।जसले विधान नमान्ने, जसले संगठनको प्रणाली नमान्ने, बैठकमा छलफल गर्ने कुरालाई महत्व नदिने , त्यस्ताले चाहिँ पार्टीलाई एक बनाएको ठहरिने ? अनि पार्टी विधान, पद्दति र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ भन्नेहरु चाहिँ फुट चाहन्छन् भन्ने कुरा गलत हो । हामी पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने पक्षमा छौं ।
Previous नेता कमरेडहरु ! पद र कुर्सीको होइन, देश र जनताको चि न्ता गर्नुस् भन्नू हुन्छ: शान्ता चौधरी..हेर्नुहोस।
Next सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस रहेको खुलासा …हेर्नुहोस!